Sida caadiga ah howl ee Android ama nidaam kasta oo kale oo ka hawlgala si fudud waa hab midkood bilaabay taleefanka si toos ah ama ay codsi marka aad doorato in aad u abuurtaan. Hawlaha waxaa dhab ahaantii aamusnaan socda ee asalka kasta labaad ee aad telefoonka smart. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in la furo kulan, waxa ay ku lug leedahay shaqo. Shaqooyinkaasi waxaa ka dhici xasuusta telefoonka, taas oo ah sababta mararka qaarkood aad telefoon Dhowaaqay marka aad isku daydo in la furo codsiyada badan waqti isku mid ah. Sababta fudud waa in ay xasuus telefoonka aad waxaa ka buuxa hawlo iyo waxba ma aan samayn karo ilaa qaar ka mid ah ay dhammaadaan. Tani waa si dhab ah looga xumaado oo mar wax baabbi'iya dhibaato, si kastaba ha ahaatee waxaa war fiican ah in codsiyo badan oo loo yaqaan Tababaraha hawsha, dilaaga hawsha ama maamulaha habka, waa halkaas ee suuqa oo ay si wax ku ool dili kara wax kasta oo aan loo baahnayn in ay maamulaan ee asalka ah.
Qaybta 1aad: Sida loo Kala Android Task Manager App iyo Android Si-samayn List Manager App Qeybta 2: Top 5 Android Task Manager Apps
Qaybta 1aad: Sida loo Kala Android Task Manager App iyo Android Si-sameeyo Maareeyaha List App
Sida caadiga ah, user wax Android oo doonaya in uu codsiga cusub ee uu telefoonka smart tegi doonaa dukaanka Play Google iyo bilaabayso raadinta magaca galay bar raadinta galo. Sidaas marka ay timaado raadinta codsiyada ka go'an in ay ku dhinteen iyo maaraynta hawlaha, waxaan ku qor in "Tababaraha hawsha". Tani waxay na tusi doonaa natiijada in ay yihiin isku darka labada codsiyada hawsha maaraynta iyo ka-sameeyo codsiyada hawsha maaraynta.
Labada nooc ee codsiyada gebi ahaanba kala duwan oo ka mid ah waa in aan isku buuqo u dhaxeeya. Si lagaaga caawiyo in aad kiiskan, let`s si kooban looga qabto qaar ka mid ah farqiyada u halkan, iska hubi
Tababaraha hawl Android
Android loo qabto tababare hawsha
1. Hawlaha nidaamka hawlgalka, Android, macruufka iyo iwm 1. jadwalka A ee waxa la sameeyo oo loogu talagalay dadka
2. No qaylodhaan 2. Alerts
3. Inta badan ee loo isticmaalo joojinta codsiyada 3. Inta badan loo isticmaalo xusuusinaya
4. Simple iyo ammaan in la isticmaalo
5. faragelinta No
Tababaraha Hawl: codsiga Tababaraha hawl A waa wax la mid ah Tababaraha hawsha ee kombuyuutarrada, taas oo kor u furmo marka aan isu geeyo jaraa'id Ctrl + Alt + Del on keyboard ah. Tababaraha Hawsha sii dayn doonaa inaad gacanta dilo qaar ka mid ah hawlaha ama geeddi socodka oo la socda ee asalka ah oo aadan rabin ama keeni karaan dhibaatooyin ka wax. Iyadoo tababaraha hawl Android waxaan sidoo kale gacanta ku qasbi karin joojin codsiyada qaar ka mid ah sida kuwa ku jira pre-rakiban ee telefoonada smart Android.
Si aad u-codsi Tababaraha hawl waa mid ka mid ah kaa caawinaya in aad u maamulaan hawlaha nolosha sida ka qaybgalka shirarka, helaya / wicitaanada qaar dadka qaarkood ama si fudud idin xusuusiyo inay biyo ka cabbaan. Codsiyada soo wargelin kartaa adigoo dhawaaqa digtoonaanta oo muujiyaan wixii fariin aad ka hor-galay inaan idin xusuusiyo in hawl gaar ah. Hawlaha aad galay tababare hawsha loo qabto waxay noqon kartaa wax kasta iyo wax walba oo aad rabto in aad. In erayada fudud, loo qabto tababare hawsha kuu ogolaanaysaa inaad si fiican aad habayso nolosha inuu sii joogo jihaysan oo abaabulan.
Qeybta 2: Best Android Task Manager Apps
Hadda waa wakhtigii la idin keeni ugu wanaagsan ee Chine Tababaraha habka android laga heli karo suuqa si aad u baadhid. Qaar ka mid ah codsiyada waa bilaash iyo qaar ka mid ah waa la bixiyey:
Advanced Task Manager-Killer Kala duwan leh qalab 4.6 / 5 Free
Daawo Manager Dog Task 1.5 & up 4.6 / 5 $3.49
Tababare Task Pro 4.0 & up 4.4 / 5 Free
Tag nadiifsan, Manager Task 2.0 & up 4.4 / 5 Free
Tababare Android Task Pro 2.0 & up 4.4 / 5 $ 4.70
1. hawl Advanced Tababaraha-dilaaga
Advanced hawl Tababaraha-dilaaga waa app ah tababaraha hawsha aad loo jecel yahay dukaanka play ah.
Gacanta dila hawlaha soo doortay
Dilay Dalka Chine oo kulan labada
Habka dilka xawaaladaha
Xasuusta nadiifiye ka mid ahaa
Cayayaanka yar yar oo qaladaad ah ee telefoonada qaar ka mid ah
Rabshado la widget auto dilay
Download Advanced hawl Tababaraha-dilaaga ka Google Play Store >>
2. Maareeyaha Task Dog Watch
Tababare Task Dog Watch ayaa sidoo kale codsiga sare ugu fiican category Tababaraha hawsha dukaanka play ah. Waa ool ah oo ka shaqeeya si ka duwan. Ee ah kuwa ka welwelsan tahay in ay wada baabbi'innay ay telefoonka kula barnaamijyadooda Tababaraha hawl doorato codsigan waa. App ayaa ku soo wargelin doonaa oo keliya marka app la bilaabo in la cuno wareegyada processor aad ee asalka ah.
Dilay kaliya Chine in la cunaa wareegyada processor
Saves awooda batariga
Aad u digaa markii app ah uu bilaabo inuu keeno dhibaatooyin
Ma dilaan wax walba oo aan kala sooc lahayn
Cayayaanka A ee update in bidbidayaan app (xal bogga app)
Muuqaalada dheeraad ah oo kaliya in version bixisay
Download Manager Task Dog Watch ka Google Play Store >>
3. Maamulaha Task Pro
Iyadoo Android pro Tababaraha hawsha aad la socon kartaa oo dila barnaamijyadooda iyo dariiqooyinka aad rabto in aad telefoon iyo badbaadin xusuusta iyo sidoo kale awooda batariga.
Xusuusta siidaysay ku ool ah
Farriimaha Rich iyo doorashada badan
Search bar ka mid ah
Cayayaanka badan oo la hagaajiyo
Shilalka ee telefoonada qaar ka mid ah
Muuqaalada aasaasiga ah ee aad u
4. nadiifsan, Manager Task Tag:
Waa a waa inuu arji soo hawsha Tababaraha Timid qaababka badan oo dheeraad ah sida khasnado lagu nadiifiyo, nidaamka xusuusta iyo mid fursadaha click. Waxa kale oo jira version a pro heli karaa oo siyaada ah la helo.
Dilay hawlaha la mid click
Tirtirtaa taariikhda dhirta, xogta app, diiwaanka raadinta, abuse call
Daahiriyo khasnado iyo APK qashinka
Hoos telefoonada qaar ka mid ah
Wuu ka badan oo xasuusta
Cayayaanka yar yar ee lagu daydo qaar ka mid ah
5. Maamulaha Task Android Pro:
Tababare Android Task Pro waa codsi kale Tababaraha hawl dukaanka in dayn doonaa inaad iska dilo hawlo aan loo baahnayn oo lacag la'aan ah xasuusta telefoonka aad.
Waxa uu ku siinayaa Liiska adeegyada iyo codsiyada faahfaahinta
Xulashada Multi iyo taageero amarkii
Mid ka mid ah taabashada, bilowdo rux hawl dhamaadka
Widgets, tababaraha codsiga iyo goobaha
Cayayaanka Just yar iyo arrimaha oo loo hagaajin karaa in updates
> Resource > Android > Manager Task Android 5 Top: Dila Hawlaha iyo Speed ​​Up Android